HomeWararka CiyaarahaAnsu Fati oo ka tirsan kooxda Barcelona ayaa markale garoomada ka maqnaan doona.
Kooxda Barcelona Ansu Fati ayaa xiddiga lagu soo calaamadeeyay in uu wajahayo caqabad dheeri ah labada bilood ee ugu dambeeyay.
19-sano jirkaan ayaa la dhibtoonayay dhaawacyo joogta ah tan iyo markii uu ka soo laabtay dhibaatooyin jilibka ah oo ka soo gaaray.
Fati ayaa keydka laga soo saaray kulankii Copa del Rey ee ay guuldarada kala kulmeen Athletic Bilbao , laakiin waxaa lagu qasbay in la saaro waqti dheeri ah, iyadoo uu garoonka la baxay isagoo ilmeyneya ka hor inta uusan u qalbi qaboojinin Xavi .
Dhaawaca Fati ayaa la fahamsan yahay inuu ka dhashay labada muruq oo dhawaan dhaawac ka soo gaaray, sport ayaa sheegaysa in dhibaatada ay ka dhigi doonto tallaalka heerka caalami ee dalka Spain inuu 5hortaag dhowr wadan ah.
Warbixintu waxa ay intaas ku dartay in Fati ay hadda go’aansato inuu doonayo in qalliin lagu sameeyo si arrinta loo saxo iyo in kale, laakiin, aadanuhu way ka warwareeyaan inay galaan qolka qalliinka ka dib markii uu hore ula qaatay khibrad xun oo mindi ah.
Fati ayaa dagaal ku qaaday 5 gool halka uu caawiye ka ahaa 10 kulan oo uu dhaley xilli ciyaareedkiisii ​​​​xumaaday ee 2021-22 waxaana uu ku faantaa wadar ahaan 18 gool iyo lix caawiye 53 kulan oo uu u diiday kooxda Catalans.